သတင်းမှားတွေ လွှင့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ့အမှု ကို နှောင့်နှေးသွားအောင် မနှောက်ယှက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက် တဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သတင်းမှားတွေ လွှင့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ့အမှု ကို နှောင့်နှေးသွားအောင် မနှောက်ယှက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက် တဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင်
သတင်းမှားတွေ လွှင့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်း ရဲ့အမှု ကို နှောင့်နှေးသွားအောင် မနှောက်ယှက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက် တဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင်
By Ga MonePosted on April 23, 2021 April 23, 2021
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန် မိုးမင်းသားကြီး ဦးဇင်ဝိုင်းဟာဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ နိုင်ငံအရေးအခြေအနေ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရား ဘက်ကရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် နော်။လူထုလှုပ်ရှား မှုမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းကို ပုဒ်မ၅၀၅(က) ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပြီး ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက် ရတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်။
လက်ရှိမှာဆိုရင်လဲ အဆိုတော်ယုန်လေးရဲ့ သတင်းအမှား ထုတ်လွင့်မူကြောင့် ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့အမှုကိစ္စမှာ အခက်အခဲတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် .။ သတင်းမှားလွှင့်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင်က အခုလိုပဲမေတ္တာရပ်ခံလာ တာပဲဖြစ် ပါ တယ်နော်…။ အခုအချိန်ထိ အဖေ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြား တာက လွဲပြီး ဘာအဆက်အသွယ်မှ လုံးဝ မရပါဘူး။
တကယ်လို့ပြန် လွှတ်ပေးဖို့ ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် နှောင့်နှေးစေ အောင် မနှောင့်ယှက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်”လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ဦးဇင်ဝိုင်း တစ်ယောက် အန္တရယ်ကင်းစွာ နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ အောင် ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး နော်…. ။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
Source ; KyiThar Htay Lwin’s Facebook acc
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သၾကၤန္ မိုးမင္းသားႀကီး ဦးဇင္ဝိုင္းဟာဆိုရင္လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအေရးအေျခအေန ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရား ဘက္ကရဲရဲဝင့္ဝင့္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ သူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္။လူထုလႈပ္ရွား မႈမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဦးဇင္ဝိုင္းကို ပုဒ္မ၅၀၅(က) ျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ ရတာ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္။
လက္ရွိမွာဆိုရင္လဲ အဆိုေတာ္ယုန္ေလးရဲ႕ သတင္းအမွား ထုတ္လြင့္မူေၾကာင့္ ဦးဇင္ဝိုင္းရဲ႕အမႈကိစၥမွာ အခက္အခဲေတြ႕ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ .။ သတင္းမွားလႊင့္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးဇင္ဝိုင္းရဲ႕သားျဖစ္သူ ၾကည္သာေဌးလြင္က အခုလိုပဲေမတၱာရပ္ခံလာ တာပဲျဖစ္ ပါ တယ္ေနာ္…။ အခုအခ်ိန္ထိ အေဖ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကား တာက လြဲၿပီး ဘာအဆက္အသြယ္မွ လုံးဝ မရပါဘူး။
တကယ္လို႔ျပန္ လႊတ္ေပးဖို႔ ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစ ေအာင္ မေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”လို႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေနတစ္ဆင့္ ေရးသားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးကလည္း ဦးဇင္ဝိုင္း တစ္ေယာက္ အႏၲရယ္ကင္းစြာ နဲ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအုံး ေနာ္…. ။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကိုလည္းအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္…။
Previous post မကြာခင် မှာ မွေးနေ့ကျ ရောက်တော့မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် အတွက် မွေးနေ့ အကြို ဆုတောင်းပေး လိုက်တဲ့ အေးသီတာ နဲ့ အိအိတုန်
Next post ကျန်းမာ ရေး နှင့် ညီအောင် ဖုန်း အသုံး ပြုနည်း